hataru/हटारु: February 2015
‘देखो इमरान, यसके आगे ‘चौपाटी’ आता हैं । हर दिन यहाँ बहुत लोग आते है– भेलपुरी खाने, पाउभाजी खाने । मेरे ख्यालमे यहाँ ज्यादातर लोगों खुली हावा खाने आते है, जिसको कमी महसुस होते है ।’
आमीर खान पत्नी किरण रावको फिल्म ‘धोबीघाट’मा यश्मिन नुर आफ्नो भाइ इमरानलाई भिडियो चिठी रेकर्ड गर्दैछे । नुर बोलेको ठाउँमा फेरि ‘पच’ गरी ‘रि’ गरें ।
कहाँ मुम्बई । कहाँ काठमाडांै । कहाँ समुन्द्रको छेउ । कहाँ सगरमाथाको काख ।
यति आकाश पाताल भए पनि ‘ताजा हावाको अभाव’ भने मिल्दोरहेछ । जस्तो काठमाण्डौंमा अभाव छ, स्वच्छ हावाको । उस्तै मुम्बईमा पनि ।
Posted by Nabin Bibhas at 10:21 AM 1 comment:
‘ठूलाबालाई कस्तो छ हँ,’ फोनमा सोधेछु, उदय जीएमलाई ।
‘ठूलाबा त कालापार (भारत) पो जानुभएको छ त,’ उदयजीको जबाफ ।
रोजीरोटीको लागि कहिल्यै भारत जान नपरोस् भनेर ढुंगा मन्साएर जनयुद्धमा लागेका थिए, ठूलाबा । अचेल कालापारे संस्कृति तन्किएर साउदी अरब र मलेसिया पुगेको छ ।
बूढ्यौलीले मुजा परेको ठूलाबाको अनुहारसित हजारौं निश्चल अनुहार आँखामा आए जो सपनाको याम आउनुअघि नै स्कुले झोला थन्क्याएर क्रान्तिमा लागेका थिए । ती अनुहार आए जो सुन्दर सपनाको पछि लागेका थिए, कोही बारी जोत्दाजोत्दै त कोही भारी बोक्दाबोक्दै । र, जिन्दगीको सिरीखुरी सुम्पेका थिए । तिनै इमान्दार माओवादी नेता र कार्यकर्ता ‘कहिल्यै फर्कन नपरोस्’ भनेर माया मारेका उही जिन्दगीमा फर्कन बाध्य थिए, ठूलाबाजस्तै ।
Posted by Nabin Bibhas at 10:13 AM No comments:
Posted by Nabin Bibhas at 10:04 AM No comments:
‘अदालत उही । सिंहदरबार उही । उही बालुवाटार । उही अनुहार भद्रकालीको’, गाडीभित्र र बाहिर झरेका आवाजको ‘भोल्युम’ क्रमशः बढ्दै थियो, ‘सबै रङका फूल आफूखुसी नफुल्दासम्म चल्छ, आँधी ।’
बसबाहिर सुनिदैथियो ः
मूल्य कति थियो ?
मूल्य कति थियो
...त्यसैले त भनिरहेछु
खबरदार ए जनताहरू
३१ वर्षीय लालधन रोका मगर उर्फ कमरेड हुरी पार्टी हेडक्वाटरले पूरा भयो भनेको राजनीतिक क्रान्ति रोल्पा नपुगी कहाँ अलमलियो ? खसोखास आफ्नै आँखाले हेर्न काठमाडौँ पुगे ।
Posted by Nabin Bibhas at 10:32 AM No comments: